प्रत्येक घरमालिकले सेप्टिक प्रणालीहरूको बारेमा के जान्नुपर्दछ - रियल इस्टेट ब्लग - realtyWW:
प्रत्येक घरमालिकले सेप्टिक प्रणालीहरूको बारेमा के जान्नुपर्दछ
अप्रिल 20, 2019 by बेथानी, कुल अवलोकन:
काम गर्ने सेप्टिक प्रणालीले घरको फोहोर शान्तपूर्वक र मर्यादाका साथ व्यवहार गर्दछ। यो कुनै पनि घरमा आलोचनात्मक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ, तर दिन सम्म बेवास्ता गरिन्छ सेप्टिक प्रणाली मर्मत आवश्यक। धेरै घरमालिकहरू, परिणाम स्वरूप, यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा चलाउन सकिन्छ भनेर अनिश्चित छन्। यहाँ केहि आधारभूत बुँदाहरू छन् जुन प्रत्येक घरमालिकले उनीहरूको सेप्टिक प्रणालीको बारेमा सचेत हुनुपर्दछ:
तपाईले के ख्याल गर्नु हुन्छ
तपाईंको ड्रेनहरू मार्फत फ्ल्याशिंग वा केहि पदार्थहरूको डिस्पोजेसनले तपाईंको सेप्टिक प्रणालीमा विध्वंश ल्याउन सक्छ। जबकि केहि आईटमहरू बन्द गर्न सक्छन् तपाईको सेप्टिक प्रणाली विभिन्न समयमा, केहि रसायनले तपाईको प्रणालीमा राम्रो ब्याक्टेरियाहरु उन्मूलन गर्न सक्छन् जुन सॉलिडहरू विघटनको लागि हो। जतिसुकै उत्पादनहरू "फ्ल्याशबल" को रूपमा मानिदैन, विशेषज्ञहरूले शौचालय कागज बाहेक अरू केही पनि फ्लश नगर्न सल्लाह दिन्छन्। डिस्पोजेबल डायपर, फ्ल्याशेबल बिराला litters, र महिला स्वच्छता उत्पादनहरु अन्य माध्यमहरु द्वारा डिस्पोजल हुनु पर्छ। ग्रीज पनि एक साधारण अपराधी हो जब नालाहरू र प्लम्बरिंग ब्याकलगहरू भेटिन्छन्। तपाईंको सेप्टिक प्रणालीको ड्रेन फिल्डहरू कहिले पनि बबलिंग देखिनु हुँदैन, किनकि यसले तपाईंको लुगा धुने बानीहरू प्रणालीको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भनेर संकेत गर्दछ। ब्लीच र पाउडर धुलाई डिटर्जेंटमा फिलरहरूले समस्याको कारण के हुन सक्छ।
असफलताको चेतावनीका संकेतहरू जान्नुहोस्
शीघ्र पहिचान र मुद्दाहरूको मर्मत, तिनीहरू उत्पन्न भएपछि, सेप्टिक प्रणालीको समग्र दीर्घायु सुधार गर्न सक्दछन्। सेप्टिक प्रणाली प्रतिस्थापन को आवश्यकता, तसर्थ, प्रणाली विफलता को चेतावनी संकेत को लागी नजर राखेर बचाउन सकिन्छ। ड्रेन फिल्डमा अवलोकन गर्न प्रत्येक पटक बाहिर घुम्नुहोस्। एक नरम र हिलो नाली क्षेत्र, भर्खरको वर्षाको कुनै संकेत नभए पनि, रातो झण्डा हो जसले पेशेवर निरीक्षणको लागि कल गर्दछ। हरियो घाँस आकर्षक लाग्न सक्छ, तर यदि तपाइँको सेप्टिक प्रणालीमा घाँस तपाइँको लनको बाँकी भन्दा राम्रो फलिफोर हुँदै छ भने, यसले अन्तर्निहित मुद्दाहरू अवस्थित छ भनेर संकेत गर्न सक्दछ।
रखरखाव संगै राख्दै
सेप्टिक प्रणालीको मर्मतसम्भारमा विफलताका चेतावनीका संकेतहरू खोज्नु र वार्षिक निरीक्षणहरूको व्यवस्था गर्नु समावेश छ। यो पनि अत्यावश्यक छ कि तपाईंको सेप्टिक प्रणाली नियमित रूपमा पर्याप्त पम्प गरिएको छ र मात्र होइन जब समस्याहरू खडा हुन्छन्। सेप्टिक ट्या tank्की पम्प एउटा सुरक्षात्मक उपाय हो जसले यसको दक्षता र दीर्घायुलाई अनुकूल बनाउँछ। यो प्रत्येक तीन देखि पाँच बर्षमा गरिनु पर्छ। तपाईंको सेप्टिक प्रणालीलाई पम्पि needs गर्न आवश्यक पर्ने सs्केतहरूमा जगेडा आवाजहरू उत्पन्न भएको ब्याक अप नालाहरू सामेल छन्।
जाडो समस्याग्रस्त हुन सक्छ
तपाइँको सेप्टिक प्रणाली को घटक जाडो को समयमा जाडो को जोखिम मा छ। यसले केवल प्रणालीमा बाधा ल्याउन सक्दैन, तर यसले सूक्ष्मजीवहरूद्वारा घनको एरोबिक विघटन रोक्न पनि सक्छ। भाग्यवस, त्यहाँ केहि उपायहरू छन् जुन तपाईं यो मुद्दा रोक्न सक्नुहुन्छ। जाडोको समयमा प्रत्येक दिन पानीको नालीबाट पानी बगाउँदा तिनीहरू फ्लस गर्न सक्दछन् र जमिन रोक्न मद्दत गर्दछ। कार वा खुट्टा ट्राफिकको साथ सेप्टिक ट्या tank्की माथि माटोलाई कम्प्रेस नगर्न यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, किनकि कम्प्रेस्ड माटो प्रणाली इन्सुलेट गर्न कम कुशल छ। एक इन्सुलेट कभर वा प्रशस्त वनस्पतिले तपाइँको प्रणालीलाई जाडोभरि इन्सुलेट गर्न मद्दत गर्दछ। जाडोमा तपाईंको सेप्टिक प्रणालीको राम्रो देखभाल गर्दै, र चिसो सर्नु अघि कुनै पनि मुद्दाहरूको मर्मत गर्नाले जमिनको खुट्टामुनि प्रणाली पहुँच गर्न संघर्ष गर्न रोक्न सक्छ।
सम्पादकको नोट: यो लेख द्वारा लेखिएको थियो हल्स्टेड मिडिया समूह। श्रीमान् र श्रीमतीको टोली, अन्ना र कोरीको नेतृत्वमा, हल्स्टेड मिडिया परिदृश्य उद्योग पृष्ठभूमि, सानो व्यवसाय ज्ञान र फर्च्यून / ग्लोबल experience०० अनुभव ल्यान्डस्केप आर्किटेक्चर फर्महरू, ल्यान्डस्केप डिजाइन / निर्माण र निर्माण उत्पाद निर्माणकर्ताहरूको अविश्वसनीय प्रभावकारी सन्तुलन ल्याउँदछ।
प्रत्येक घरमालिकले सेप्टिक प्रणालीहरूको बारेमा के थाहा पाउनु पर्छ जान्नुहोस् र शीर्ष, अग्रणी, उद्योग विशेषज्ञहरूबाट अधिक जान्नुहोस्।
बेथानी अप्रिल 20, 2019
यो प्रविष्टि मा पोस्ट घर सुधार र ट्याग पिछवाडे, घर मालिक सेप्टिक प्रणाली, घरमालिक सल्लाहहरू, घर मालिकको गाईड, घर मालिकहरू, सेप्टिक, सेप्टिक प्रणाली, सेप्टिक प्रणाली सल्लाहहरू। बुकमार्क को Permalink.
नोभेम्बर 9, 2017 रूफ म्यानका लागि CDX प्लाईवुड छनौट गर्न घर मालिकको मार्गनिर्देशन धेरै जसो घरमालिकहरूले एकल वा इन्सुलेशनलाई छतको मुख्य भागका रूपमा लिन्छन्। भित्र नदेखिने भित्री तहमध्ये एक छानाको सेथिंग हो। छानाको यस अन्तर्निहित तह उचित कामका लागि र छानाको आयुका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ। छाना म्यान गर्ने प्लाईवुड वा काठका तखताहरूका दागहरू वा राफ्टरको मुनि स्थापना गरिन्छ। त्यहाँ छत म्यान गर्ने दुई प्रकारका छन् - खुला र बन्द। म्यानिंगको प्रकार खाली छ कि छैन मा निर्भर गर्दछ […] पोस्ट घर सुधार
जुन 21, 2018 किन व्यावसायिक छत सेवा तपाईंको घरको लागि राम्रो छ? के तपाईंले कहिल्यै एक व्यक्ति उत्साहित देख्नुभएको छ किनकि ऊ वा उनी आफैले छानाहरू ठीक गर्नु पर्दछ? यसले तपाईंलाई कार्यको बारेमा धेरै कुरा बताउँछ। छत पुनर्स्थापना वा प्रतिस्थापन एक थकाउने काम हुन सक्छ कि यदि तपाईंसँग पर्याप्त सुरक्षा गियरहरू र सुरक्षा प्रशिक्षण छैन भने चाँडै एउटा गलत मोड लिन सक्छ। ब्रिस्बेन, सनशाइन कोस्ट, र वरपरको उपनगरीय क्षेत्रका सयौं व्यक्तिहरूले विगत दुई वर्षमा धेरै दुर्घटनाहरू अनुभव गरेका छन् उनीहरूको छतका आवश्यकताहरूको हेरचाह गर्न प्रयास गर्दा […] पोस्ट घर सुधार
अगस्ट 23, 2018 युवा गृहस्वामी जोडीहरूका लागि मार्गनिर्देशन पहिलो पटकको खरीददार हुनुलाई उनीहरूको २०, s० र अधिक पछाडिको तनावपूर्ण अनुभव हुन सक्छ। तर नडराऊ, तपाईं एक्लो हुनुहुन्न। यस लेखले घरको स्वामित्वमा त्यो पहिलो foray थोरै सजिलो बनाउन मद्दतको लागि चरणहरूको सूची प्रदान गर्दछ। त्यसो भए तपाईले यो गर्नुभयो। एक स्थिर आय, एक स्थिर सम्बन्ध र तपाइँ तपाइँको भर्खरको जमींदारको पञ्जाबाट उम्क्नुभयो, जो कसैको लागि आमा वा बुबाको रूपमा लिन सक्दछन्। विश्व तपाईंको कस्तूरी। र अब तपाईं एक रमाईलो को [को कोरिडमा हुनुहुन्छ […] पोस्ट घर जग्गा लगानी, घर जग्गा वित्त
अगस्ट 28, 2018 द्रुत घर बिक्रीको लागि तपाईंको यार्ड कसरी तयार गर्ने? चाँडै सम्पत्ती बेच्न कुनै सजिलो काम हुँदैन, तर केहि सरल सुझावहरूको अनुसरण गरेर पक्कै पनि प्रक्रिया सजिलो हुन्छ। घर बिक्रीको सब भन्दा कम महत्त्वका पक्षहरू मध्ये एक तपाईंको यार्ड हो र कर्ब अपीललाई सुल्झाउनाले सम्झौता बन्द गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसकारण RealtyWW.info मा हामीले सुझावहरू र युक्तिहरूको ड्यास तयार गरेका छन तपाईलाई तपाईको पछाडिको आकारमा मद्दत पुर्‍याउन जुन कुनै पनि खरिददारलाई डराउँदछ, यार्डको ख्याल राख्नुहोस्। पहिलो कुनै पनि कुनै पनि घर जग्गा एजेन्टलाई हेर्दा उनीहरूले […] पोस्ट यार्ड र बगैचा
फेब्रुअरी 4, 2017 तपाईंको आफ्नै घरपछाडि स्वर्गको सानो टुक्रा तातो वसन्त महिनाहरू कुनाको वरिपरि छन् र तपाइँलाई रिट्रीट चाहिन्छ। तपाईको आफ्नै घरपछाडि बाहेक अरू कुनै कारण देख्नु हुँदैन। यदि तपाईंले यसमा थोरै प्रयास गर्नुभयो भने - घरको पछाडिको भाग विश्रामको एक ओएसिसमा परिणत हुन सक्छ। तपाईको शैली र प्राथमिकतामा निर्भर गर्दै - यो ध्यान र विश्रामका लागि शान्तिमय ठाउँ हुन सक्छ वा केही थप मनोरन्जनमुखी। तपाईंको डेक निर्माण गर्दै पोखरी वा फायरप्लेसको नजिक आउटडोर डेकहरू साना पार्टीहरूको लागि उत्तम ठाउँ हो […] पोस्ट यार्ड र बगैचा
अप्रिल 9, 20193तरीकाहरू तपाइँको आउटडोर आँगन समरको लागि तैयार छन् दिन जति लामो र हल्का हुँदै जान्छ, बाहिरी आँगनको जीवन धेरै आकर्षक देखिन्छ। अल फ्रेस्को ताराहरूमुनि भोजन गर्दै, पोखरीमा साताको अन्त्यमा बिताउँदै, र साथीहरू र परिवारलाई बारबेकका लागि निम्त्याउनु घरभित्रै बस्नु भन्दा धेरै मोहक जस्तो देखिन्छ। यसैले तपाईंले मैदानमा हिर्काउनु पर्छ र आफ्नो घरको पछाडिको चाँडो राम्रो दिनको लागि तयार गर्नुहोस्। यहाँ कसरी छ: तपाईंको पूलस्केप पुन: गर्मी गर्मी मौसमले तपाईंलाई तपाईंको आउटडोर पोखरी र आँगनमा धेरै पटक आकर्षित गर्दछ। हो र […] पोस्ट यार्ड र बगैचा
जुन 6, 2016 तपाईंको शौचालय रद्दीटोकरी होइन:5चीजहरू तपाई फ्ल्शिंग हुनुहुन्न जे होस् शौचालय र रद्दी टोकरीहरू फोहोर हटाउने उपकरणहरू हुन्, शौचालय एउटा रद्दी टोकरी होइन। सबै धेरै अक्सर, व्यक्ति चीजहरू फ्लश गर्दछ जसले गर्दा भराई र पछाडि बग्दछ जुन परिणामस्वरूप बग्ने शौचालय र पूरै प्लम्बिंग नेटवर्कलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ। कहिलेकाँही क्षतिले महँगो मर्मत र उच्च सम्पत्ति बीमा प्रीमियममा परिणाम दिन्छ। यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईं फ्लस गर्न लोभ्याउन सक्नुहुन्छ, तर निश्चित रूपमा गर्नु हुँदैन। मानव र पाल्तु जनावर कपाल शौचालय कागज विपरीत, कपाल छिटो तोड्न छैन जब […] पोस्ट घर सुधार
सेप्टेम्बर 10, 2018 नियमित नाली सफाई सेवाहरूको शीर्ष benefits लाभहरू तपाईंको घरको नालीहरू तपाईंको पाइपम्बिing प्रणालीको आवश्यक अंशहरू हुन्। राम्रोसँग काम गर्ने ड्रेनेज प्रणाली बिना, तपाईंको घर सफा, सुरक्षित र कुशल ढ in्गले फोहोर पानीबाट छुटकारा पाउने छैन। यसैले घरमालिकहरूले नियमित ढल निकास सफा गर्ने सेवाहरूको बारेमा विचार गर्नुपर्नेछ किनकी यसले तपाईको प्लम्बिंग प्रणाली जहिले पनि काम गर्ने अवस्थामा उत्तम हुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ। यहाँ नियमित सफा सफाई सेवाहरु का लाभहरु छन्। सीमाहरूको दुर्गन्ध हुन्छ मलमा सामान्यतया भयानक हुन्छ […] पोस्ट घर सुधार